Abalandeli be-Instagram basimahla | Ukuthanda ii-Instagram Likes
Thenga i-USA / UK Abalandeli baka-Instagram
Thenga Abalandeli be-Instagram bemihla ngemihla
Thenga iiHashtags zoPhando kunye noPhuculo lweProfayili
Thenga i-Instagram Package Deal
Thenga ukuthanda ukuNgqinisisa i-Instagram
Thenga ukuvela kwe-Instagram kunye nokufikelela
Thenga IGTV Views
Thenga ukuJolisa kunye ne-Organic ye-Instagram Growth
Ukuthandwa kwe-Instagram yasimahla
Thenga ababukeli beTwitch ebukhoma
Fumana Ukukhula okukhawulezayo kunye nokuJoliswe ngabalandeli be-Instagram basimahla kunye nokuThandayo namhlanje!
Sebenzisa inkonzo yethu ukufumana ekujoliswe kuko, umgangatho ophezulu, Abalandeli be-Instagram basimahla kwaye free Instagram Likes! Ukuvuselelwa okungenamkhawulo ukuqhubeka nokufumana ukukhula kwemihla ngemihla. Akukho phando!
Fumana abalandeli be-Instagram kunye neeMidlalo zaMahala or Thenga Abasebenzisi be-Instagram
Amanyathelo alula okuvula iNkonzo yethu yasimahla
Kulula ukujolisa, kumgangatho ophezulu, Abalandeli be-Instagram basimahla or ukuthandwa simahla kwi-Instagram kwinethiwekhi yethu! Inkqubo ithatha kuphela imizuzu emi-2 ukwenza isicwangciso kwaye nantsi amanyathelo:
Bhalisa kwaye ungene
Sebenzisa isiCwangciso saSimahla
Landela iiprofayili zoMdla
~ Imizuzu emi-2 kamva, Wenziwe!
Fumana abaFundi beSimahla!
Bhalisa iAkhawunti yakho yasimahla ngoku
Izicwangciso zabalandeli ze-Instagram
Ibaleka iiyure ezingama-48
Fumana abalandeli abangama-25
Landela iiprofayili ezili-10 ekuJoliswe kuzo
Ukuhlangula kwiiyure ezili-48
Sebenzisa i-1x qho kwiiyure ze-48
Abalandeli Bokwenyani, Akukho Bhoyi!
Ikhuselekile, ikhuselekile kwaye yabucala
Abalandeli Bemihla ngemihla
Abalandeli bemihla ngemihla abali-15 ($20.00) Abalandeli bemihla ngemihla abali-30 ($40.00) Abalandeli bemihla ngemihla abali-60 ($80.00)
Fumana 15 Abalandeli ekujoliswe kubo
Landela iiprofayili ezili-0 ekuJoliswe kuzo
Ukuhlangula qho kwiiyure ezingama-24
Izicwangciso ze-Instagram Ukuthanda
Zuza i-20 Likes kwi-1 Post
Ukuhlangula kwiiyure ezili-24
Uvula i-1x qho kwiiyure ezili-24
25 ukuthandwa ngePosti nganye ($20) 50 ukuthandwa ngePosti nganye ($40) 100 ukuthandwa ngePosti nganye ($80) 200 ukuthandwa ngePosti nganye ($160) 500 ukuthandwa ngePosti nganye ($350) 1000 ukuthandwa ngePosti nganye ($700)
Fumana 25 Uthanda ngeposi nganye
Ukuhambisa ngaphakathi kweMizuzu
Ukuhambisa ngokuzenzekelayo kwizithuba ezitsha
Izizathu ezi-7 kufuneka ujolise ekufumaneni abalandeli be-Instagram simahla
Ukuqatshelwa kwi-Instagram kunokuba yenye yezona zinto zinkulu ezitshintsha umdlalo phaya ukunceda ishishini lakho ukuba lihambe. Ukufumana abalandeli kunye nokuthandwa kunceda ukusasaza ulwazi ngebrand yakho kunye nokufikelela kubathengi abanokubakho. Indawo yokwabelana ngemifanekiso eqhayisa ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi zabasebenzisi, ngaphezulu kwe-500 yezigidi zabasebenzisi bemihla ngemihla. Nabani na wonke umntu uku-Instagram, kwaye nabo bonke abo bantu phaya besabelana kwaye bebeka izimvo kwizithuba kunye nemifanekiso, ucinga ukuba ukufumana abalandeli kuya kuba sisiqwenga sekhekhe. Kodwa, njengezona zinto zininzi ebomini, ukwakha ubukho beendaba zosasazo oluluqilima kufuna umonde kunye nokuzimisela. Nokuba iingcali zithi ngumsebenzi onzima. NgokweNgcali yoLwazi lokuKhula kwezeNtlalontle, uTalia Koren, ukwakha okulandelayo ngokusempilweni nakweliphi na iqonga leendaba zentlalo kukuzibophelela okukhulu, kwaye ukufumana ezo zinto zithandwayo kunye nabalandeli kuthatha iqhinga, ubuchule kunye nexesha elininzi.
UMnu Insta Ngaba Isisombululo sakho Free
Kukho iinkampani apha ezinokunceda ukukhulula uxinzelelo lokuphuhlisa ubukho bakho be-Instagram, njengathi, Mnu Insta! Ngapha koko, sibanceda kakhulu abathengi bethu ngokunika abalandeli be-Instagram simahla! Kulungile-simahla! Ngento enkulu onokuthi ucinge ngayo, yintoni ebanjwayo?
Ngokwenene ilula kakhulu kwaye ithatha nje imizuzu embalwa yexesha lakho. Ngena nje ngokulula, yenza isicwangciso sasimahla kwaye uya kuboniswa ngeeprofayile ze-Instagram oza kuzilandela. Ezi profayili ze-Instagram ziya kujoliswa kwizinto onomdla kuzo kwaye ungatsiba nayiphi na into ongafuni ukuyilandela. Emva kokuba ulandele inani elifunekayo leprofayili, isicwangciso sakho siya kuqaliswa. Siza kuhambisa abalandeli be-Instagram kwiakhawunti yakho kwiiyure ezingama-48, akukho mibuzo ibuzwayo. Eyona nto ingcono kakhulu, ungaphinda eli nyathelo rhoqo kwiiyure ezingama-48. Oku kuthetha ukuba ungaqhubeka ukhulisa iakhawunti yakho ngonaphakade!
Side sibe neenketho kubathengi bethu ngaphandle Abalandeli be-Instagram basimahla. Ukuba iakhawunti yakho ifuna uthethathethwano, unga Thenga abalandeli be-Instagram, ukuthandwa, izimvo, kunye nokuninzi. Okanye, joyina enye yezicwangciso zethu zenyanga zobhaliso. Ezi zicwangciso zizisa abalandeli abafanelekileyo okanye isithuba esithandwayo kwiprofayile yakho yonke imihla; konke kutshintshiselwano ngentlawulo ephantsi yenyanga.
Ngaba uyazibuza ukuba ukuthenga okanye ukufumana uncedo lwasimahla kulungile kuwe? Ukuba kunjalo, funda ngenxa yezizathu ezisi-7 eziphezulu zokuba kutheni ukufumana abalandeli abaninzi yeyona nto ilungileyo kwishishini lakho kunye nebhrendi.
Ufuna ukwakha ukuba semthethweni kwenkampani yakho
Ngokubaluleka okukhulayo kweendaba zosasazo kumashishini, ukusebenza kweakhawunti kuye kwaba yinto ethatha isigqibo sokuba ngaba abathengi bafuna ukwenza ishishini nawe. Ukuba iprofayile yakho yeshishini inenani elikhulu labalandeli, kuya kubonakala kubathengi ukuba inkampani yakho ibikhe yajikeleza okwethutyana kwaye iyayazi into eyenzayo. Iinkampani ezinabalandeli abambalwa kunye nokuzibandakanya okuphantsi kubonakala ngathi akunamava. Ngenxa yoko, abathengi banokugqiba ngokuchasene nokuthenga imveliso yakho. Ukufumana abalandeli abongezelelekileyo kwenza ukuba iprofayili yakho ibonakale ilunge ngakumbi kwaye ibheje amathuba akho okufumana abathengi bokwenyani.
Umtsha kumajelo asekuhlaleni kwaye iprofayile yakho inokusebenzisa isiphakamisi
Yinyaniso elusizi yokuba uninzi lweeprofayile ze-Instagram zinobunzima bokuqatshelwa ngaphambi kokuba zikwazi ukufumana okulandelayo. Kweminye imisebenzi, njengeshishini lefashoni, iimodeli azinakuthathelwa ngqalelo ukuba ziqeshwe ukuba azinamanani athile abalandeli. Isizathu sesokuba, uninzi lweempawu zifuna ukuqesha abantu abaziwayo kwintsimi yabo ngolo hlobo lomsebenzi. Oku kunokubeka iimodeli ezizayo nezizayo kwindawo engalunganga kakhulu xa uzama ukubhaqwa.
Ngelixa sinethemba lokuba ishishini lakho alikho ngqongqo kangako, inyani yomcimbi ziiakhawunti zeshishini elitsha, kwaye ngomanyano, amashishini amatsha, anobunzima bokubona. Liqhinga elaziwa kancinci, kodwa uninzi lweenkampani sele zithengile abalandeli be-Instagram. Kulungile, iindawo zokutyela, iimbaleki, iimpawu zempahla, kunye nabezopolitiko bonke bathenge abalandeli kwiiakhawunti zabo kwaye babone iziphumo ezimangalisayo. Ngokuchitha inxalenye encinci yebhajethi yakho yokuthengisa kubalandeli be-Instagram, wenza into efanayo nokuhlawula ukunyusa isithuba kwi-Instagram. Umahluko kukuba, imali yakho iya kude kakhulu xa uthenga abalandeli kuba uqinisekile ukuba uya kufumana imali oyithengileyo. Xa usonyusa isithuba, okona kulungileyo onokukwenza kunethemba lokufikelela kumakhulu ambalwa abalandeli, kwaye iziphumo aziqinisekiswanga.
Ufuna ukubonwa ngababukeli abaninzi kubathengi
Cinga ngendlela onokuthi ugwebe ngayo iprofayile yomhlobo ongenabalandeli abaninzi, okanye isithuba esingenalo uthethathethwano oluninzi. Kunokuba nzima ukuvuma, kodwa ekugqibeleni, sonke sicinga into efanayo xa sibona ezi zithuba; akathandwa lomntu. Le ngcinga ivela kwisimilo somntu esibizwa ngokuba “bubungqina boluntu.” Ngokobungqina boluntu, sivame ukugweba indlela yokuziphatha kunye nento esiyithandayo ngokusekelwe kwindlela abanye abaziphatha ngayo, kunye nento abayithandayo. Ungayibona le nto isebenza kuwo onke amaqonga eendaba ezentlalo.
Yindlela izithuba ezikwazi ngayo ukuya kwintsholongwane. Umntu ubona isithuba esinomdla, ngoko bayabelana nabalandeli babo. Abalandeli babo babona ukuba lo mntu unokuba uyonwabele eso sithuba kuba babelane ngaso, ukuze abalandeli babo baqalise ukwabelana nabo. I-Instagram ithanda izithuba ezivela kwiiakhawunti ezinokuzibandakanya okuphezulu kwaye zinenani elikhulu labalandeli. Ke njengoko iiposti zakho zifumana utsalo ngokuthanda kunye nezimvo, ukuba iakhawunti yakho inabalandeli abaninzi, uya kubonakala uphezulu kwaye uphezulu kukhangelo. Kungekudala, uthethathethwano luqala ukuba yibhola ekhephu, kwaye kungekudala, abantu abaninzi bayibonile iposi yakho. Xa uthenga abalandeli be-Instagram, uthatha inyathelo lokuqala ukuya kwintsholongwane, kwaye ubonwe ngamawaka, okanye izigidi zabathengi.
Uxakeke kakhulu ngamanye amaphulo eshishini
Ukulawula ishishini kuthatha umsebenzi onzima kunye namandla. Imisebenzi engenakubalwa kufuneka igqityiwe ukugcina imisebenzi isebenza kakuhle, kodwa zininzi kakhulu iiyure ngosuku. Sele sithethile malunga nexesha elithathwayo ukwakha i-Instagram esempilweni elandelayo, kwaye amathuba okuba, unoluhlu olupheleleyo lokuhlamba ezinye, mhlawumbi ezibaluleke ngakumbi, imisebenzi yeshishini ekufuneka yenziwe. Unokuqesha umphathi weendaba ezentlalo ukuba anakekele iprofayili yakho, kodwa oko kuya kuthetha ukuba uxhoma ngaphezulu kwe- $ 50,000 ngonyaka ngomvuzo wabo kunye nezibonelelo. Ukuba uthenga abalandeli be-Instagram, uzigcinela imali kunye nezixhobo ezinokuthatha ukuqesha umntu okanye ukhulise iakhawunti yakho ngokwakho. Oku kukhulula ixesha elixabisekileyo kusuku lwakho, kukuvumela ukuba ugxile ngcono kwiinjongo zenkampani ezibalulekileyo.
Ufuna ukwakha okulandelayo kwezinye iisayithi zemidiya yoluntu
I-Facebook ithenge i-Instagram kwakhona kwi-2012. Xa ezi nkampani zimbini zidityanisiweyo, amaqonga enza ukuba kube lula ukuthumela kuFacebook, kuTwitter, nakwiTumblr kanye kwi-Instagram yakho! Unokutshintsha useto lwakho ukuba uluthumele ngokuzenzekelayo ku-Facebook ngalo lonke ixesha ubhala nge-Instagram. Ngenxa yokusebenza ngokusondeleyo kwe-Facebook kunye ne-Instagram, amathuba okuba uyathandwa kwi-Instagram, ayizukuthatha thuba lide ngaphambi kokuba ufumane udumo nakuFacebook. Ukuthenga abalandeli be-Instagram kunyusa ukuthandwa kwakho kwaye kukunike ithuba elingcono lokuthandwa kwezinye iisayithi.
Ufuna uphononongo oluchanekileyo
Ukuphonononga iisayithi ezinje ngeYelp, uGoogle kwiShishini, kunye noMcebisi wohambo ayisiyondawo kuphela apho abathengi banokushiya uluvo lwabo. Iakhawunti ye-Instagram enabalandeli abaninzi ifana neprofayile yeshishini yeYelp enezinto ezininzi ezintle. Emva kwayo yonke loo nto, abantu abalandela iphepha lakho batyikitye ukuze babone umxholo wakho, kwaye ke iimveliso zakho, kwiindaba zabo bondla yonke imihla. Iziphumo, bacinga ukuba lihle kakhulu kwishishini lakho! Xa abathengi abanokubona inani elikhulu labalandeli kunye nokuzibandakanya okuphezulu kwizithuba zakho, iziphumo ziyafana nokubona uphononongo oluninzi oluqinisekileyo. Ukufumana abalandeli kwenza iimveliso kunye neenkonzo zakho zibonakale zikumgangatho ophezulu kubathengi kwaye isebenza njengendlela yokuphucula umlinganiso wakho kukhuphiswano lwakho.
Ufuna ukwenza imali engakumbi!
Imithombo yeendaba zentlalo ibe yinxalenye ebaluleke kakhulu kuyo nayiphi na indlela yokuthengisa. Isizathu sokuba uthathe ixesha lokwenza iiprofayili kumaqonga ohlukeneyo kulula, ufuna ukwandisa inzuzo kwishishini lakho. Wonke umntu we-Instagram's 1 yezigidigidi zabasebenzisi ngumthengi onokubakho. Kodwa, ngenxa yealgorithm ye-Instagram, kunokuba nzima kakhulu ukuba kubonwe nangamaqhekeza abo bathengi. Ukuthenga abalandeli be-Instagram kwangoko kwonyusa inani labantu ababona iimveliso zakho. Okukhona abantu bebona iimveliso zakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba abantu bazithenge iimveliso zakho, bonyuse ukuthengisa kwakho, kwaye bancede eyona nkampani iphantsi.
Ngaba usazibuza ukuba ukuthenga okanye ukufumana iinkonzo zasimahla kulungile kuwe?
Suku ngalunye amashishini amaninzi ajoyina i-Instagram njengendlela yokuthengisa iimveliso zabo kubathengi babo. Oku kuthetha ukuba, ukhuphiswano luya lukhula, kwaye kunzima kakhulu ukuqinisekisa ukuba ilizwi lenkampani yakho liyavakala. Xa usenza ukhetho lokuthenga abalandeli be-Instagram, wongeza kwangoko iinzame zentengiso yeshishini lakho, kwaye useka ubukho bophawu lwakho. Ugcina ixesha kusuku lwakho lomsebenzi, ufumane ukuthandwa ngabaphulaphuli bakho, kwaye ekugqibeleni, ufumane imali eninzi kwishishini lakho.
Ukuthenga abalandeli yenye yezona mfihlo zigciniweyo zentengiso kwaye yeyona ndlela ixabisekileyo nesebenzayo yokwenza ishishini lakho laziwe kumajelo eendaba ezentlalo.
Ngaba uyafuna ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi kwaye ukhulise iakhawunti yakho ye-Instagram? Fumana abalandeli be-Instagram simahla kuthi, Mnu. Insta, okanye uthenge ipakethe yothethathethwano namhlanje!
Ngaba unemibuzo malunga nenkonzo yethu? Nantsi imibuzo yethu ebuzwa rhoqo:
Kutheni ndifuna abalandeli be-Instagram simahla?
Sonke siyazi ukuba abalandeli abaninzi be-Instagram banezibonelelo ezininzi kwiakhawunti yakho ye-Instagram. Xa unabalandeli abaninzi, udla ngokufumana ukuthanda okuninzi, izimvo ezingakumbi, kunye neembono ezingakumbi. Oku kunceda ngokwenene abo bazama ukuziphilisa okanye ukufumana sesichengeni ngokusebenzisa i-Instagram.
Emva kweminyaka yokuba ziinkokeli kumzi-mveliso “Wabalandeli be-Instagram basimahla,” siye saphuhlisa inkqubo yasimahla ye-100% yabasebenzisi ukufumana abalandeli abaninzi be-Instagram yonke imihla. Zikumgangatho ophezulu kwaye zijoliswe kwizinto ozithandayo. Konke okufuneka ukwenze kukunxibelelana neeakhawunti ezimbalwa ze-Instagram ezibhenela kuwe!
Sisigqibo esilula ukusebenzisa uMnu Insta. Awudingi ukuba ugcwalise naluphi na uphando okanye unikeze ulwazi lomntu. Okona kulungileyo, ungasebenzisa inkonzo yethu yasimahla inani elingenamkhawulo lamaxesha! Oku kuthetha ukuba ungafumana abalandeli abaninzi yonke imihla, okoko nje ufuna ukuqhubeka ukhula.
Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa inkonzo yakho yasimahla?
Kucacisiwe gca ukuba abasebenzisi ababelana ngamagama abo e-Instagram kunye negama lokugqitha kunye neendawo zomntu wesithathu / iiapps banokubeka iakhawunti yabo emngciphekweni. Ngoku ka Instagram,
Ukuba unika ezi apps ulwazi lwakho lokungena, nokuba luphawu lofikelelo okanye ngokubanika igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, banokufumana ufikelelo olupheleleyo kwiakhawunti yakho. Bangabona imiyalezo yakho yobuqu, bafumane ulwazi malunga nabahlobo bakho, kwaye banokuthumela ugaxekile okanye omnye umxholo onobungozi kwiprofayile yakho. Oku kubeka ukhuseleko lwakho, kunye nokhuseleko lwabahlobo bakho emngciphekweni.
Uya kuqaphela xa usenza iakhawunti yakho yasimahla, ASIFUNI ukufikelela kwiprofayile yakho ye-Instagram. SINGAZE sikubuze igama eliyimfihlo kwaye sicebisa ukuba ungayikhuphi le nto, NAKHO! Sifuna ukuba unikeze igama lakho lomsebenzisi le-Instagram. Oku kuyafuneka ukuze sazi ukuba yeyiphi iakhawunti ekufuneka sithumele kuyo abalandeli.
UMnu. Insta uhambisa abalandeli basimahla ukusukela ngo-2013. Enyanisweni, singabokuqala ekunikeleni ngezi nkonzo. Uyakuqaphela ukuba iinkonzo ezininzi ziye zavela zibanga ukuba zibonelela ngabalandeli basimahla, kodwa zihlala zifuna ulwazi lweakhawunti yakho, okanye ukuba ugqibezele umsebenzi onzima ongafanelanga ukuba nawo. Ukutyhubela iminyaka, asikaze sibenayo iakhawunti ye-Instagram yavalwa. Sihlala sijonga uhlaziyo olwenziwe yi-Instagram kwaye sihlengahlengise iindlela zethu zokuhambisa ngokufanelekileyo.
Ngaba aba balandeli be-Instagram bayinyani?
Ngokwenene sibonelela abalandeli bokwenyani kubathengi bethu abahlawulwayo, ngokungafaniyo ne-98% yeewebhusayithi ngaphandle. Uninzi lwezinye iiwebhusayithi zibanga ukuba zibonelela ngale nkonzo yasimahla, kodwa ayenzi njalo!
Siyakwazi ukubonelela ngenkonzo yasimahla kuba wonke umlandeli ozuzwa kusetyenziswa inkonzo yethu yokulandela4follow ngomnye umsebenzisi njengawe.
Inkonzo yethu luluntu oluvumela ukuba abantu abanengqondo efanayo bafumane omnye komnye kwaye banxibelelane. Singumlamli nje.
Sukuqhathwa ziisayithi ezithi zibonelela ngabalandeli bokwenyani. Kuhlala kusithiwa ukuba kujongeka kukuhle kakhulu ukuba yinyani, kunokwenzeka ukuba…kwaye ukuze kucace ngokupheleleyo, kufuneka siqaphele ukuba umgangatho wabalandeli uya kwahluka. Oku kungenxa yokuba abanye abantu babeka nje umzamo omkhulu kwiiakhawunti zabo kunabanye. Oku kuyafana nokuthethwa malunga ne-Instagram xa iyonke. Ke, ungothuki ukuba umzuzu omnye uphawu olupholileyo luyakulandela kwaye ngomzuzu olandelayo umntu oqhelekileyo oneefoto ezimbalwa wenza.
Nokuba loluphi na uluhlu lwabalandeli abathunyelwa kuwe bonke, bakhethwa kwizinto ezifanayo ozikhethileyo xa ubhalisela inkonzo yethu.
Ndigcina njani abalandeli bam be-Instagram?
Kubalulekile ukuqaphela ukuba ngumsebenzi wethu ukuhambisa abantu abatsha kwiphepha lakho le-Instagram mahala. Ngumsebenzi wakho ukubagcina apho. Uphononongo lubonisa ukuba ukuba iphepha lakho alinawo umxholo omninzi okanye alinikezeli umxholo omtsha kunye nokuzibandakanya rhoqo amanani akho aya kuwa.
Senza konke okusemandleni ethu ukubonelela abantu abanomdla ofanayo. Oku kuthetha ukuba ukucinga ukuba iphepha lakho libonelela ngomxholo malunga nezinto onomdla kuzo ozikhethileyo ngaphambi kokuba usebenzise isicwangciso sasimahla okanye esihlawulelwayo, onokuthi ulondoloze kwaye ukhulise iphepha lakho. Iingcali zicebisa ukuba ukuthumela umxholo osemgangathweni ngamaxesha angama-1-3 ngosuku kubonakala kukhanga iziphumo ezilungileyo. Kubalulekile ukuthatha ixesha lakho kunye nezithuba zakho. Qinisekisa ukuba iifoto / iividiyo zikumgangatho ophezulu kwaye zihambelana nomxholo we-Instagram yakho.
Okokugqibela, qiniseka ukuba usebenzisana nabaphulaphuli bakho. Ukuba bahlomla kwizithuba zakho qiniseka ukuba uyabaphendula. Kwakhona cinga ngokundwendwela iphepha labo kwaye ubanike ukuthanda okanye ezimbini. Kuya kuhamba ngendlela xa kuziwa ekudaleni ubudlelwane bexesha elide kunye nephepha lakho.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iinkonzo zasimahla?
Nje ukuba usebenze ngempumelelo isicwangciso sasimahla, uya kuqala ukubona abantu abatsha beqala ukulandela iprofayile yakho kwimizuzu emi-5. Kuba ufumana abalandeli bokwenyani nabasebenzayo, abangeni ngaxeshanye. Njengoko isicwangciso sakho siqhuba kwiiyure ezingama-48 ezizayo, uya kuzifumana ngokungenamkhethe phambi kokuba isicwangciso siphelelwe lixesha. Ngelo xesha, unokubuyela kwaye uyivule kwakhona.
Ukuzihambisa kwipateni yendalo kunye neyendalo yokwenyani ixesha elide kunye nokukhula okuzinzileyo kunceda ukuqinisekisa ukhuseleko lweakhawunti yakho ye-Instagram. Ayikho enye inkonzo kwi-intanethi ebeka le nkathalo ingako ekuhanjisweni kweenkonzo zabo zasimahla. Sikhathala ngalo lonke ilungu loluntu lwethu kuba ngaphandle kwakho, ngekhe isebenze.
Kutheni le nkonzo isimahla?
Yile nto besisoloko siyenza! Siliqela labantu abathanda ukuza nezixhobo ezikhulu ezinokusetyenziswa ngumntu wonke, nokuba ungubani na okanye uphi na emhlabeni. Ayikho enye indawo yokukhula kweMedia yeNtlalo enokuthi ngokwenene le.
Ukusukela ekuqaleni ngo-2013, xa sasiqala akuzange kube kudala ngaphambi kokuba zonke ezinye iisayithi ziqale ukuphinda iinkonzo zethu. Noko ke, basilela ngeendlela ezininzi. Ngokwenene abakhathali ngabasebenzisi babo basimahla. Oku kuboniswa ngokufunda uphononongo lwabo olubi olungenakubalwa kwi-intanethi.
Ayiyi kuthi! Siyakuqonda ukubaluleka kokufumana iprofayile ye-Instagram emhlabeni. Ngumsebenzi onzima kwaye namhlanje amathuba abekwe ecaleni kwakho.
Yiyo loo nto siya kuhlala sizama ukunika ixabiso lokwenyani nokuba uthenga inkonzo kuthi okanye hayi. Sifuna nje ukukunceda ukuba wakhe kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi endleleni uya kuzama enye yezinye iinkonzo zethu. Ukuba awenzi njalo, kulungile! Sibonisa oku ngokukuvumela ukuba usebenze kabini rhoqo kwiiyure ezingama-48 kwaye simahla ngonaphakade!
Ndiyenza njani imali kwi-Instagram yam?
Zininzi iindlela zokwenza ingeniso usebenzisa i-Instagram. Oku kuqala ngokuba nephepha elihle. Eli phepha likhulu kufuneka libe nomxholo ophezulu ojoliswe kubaphulaphuli abathile. Ngokungathandabuzekiyo, eli lelona nyathelo libalulekileyo lokwenza imali kwi-Instagram.
Ngoku, ungaqala ukwakha okulandelayo. Iinkonzo zethu zasimahla zinceda iiakhawunti ezininzi ukwenza oku ngomzamo omncinci kakhulu. Sihambisa abasebenzisi ekujoliswe kubo ngokusekwe kukhetho olwenzayo xa usenza iakhawunti. Nje ukuba wakhe isiseko esikhulu sabalandeli esaneleyo, unokufikelela kubanini bamashishini/iimveliso njlnjl. ukubonisa imveliso okanye inkonzo yabo ngomrhumo.
Kukho iiwebhusayithi onokuzisebenzisa ukukunceda ukudibanisa nenkampani efanelekileyo kwiakhawunti yakho ye-Instagram. Abantu abaninzi ehlabathini jikelele bayakwenza oku.
Kuthekani ukuba ndifuna ukunxibelelana nawe malunga neakhawunti yam?
Kulapho siqaqamba khona ngokwenene! UMnu Insta UYA kuphendula kuwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24-48 eziqinisekisiweyo! Nokuba sikhulu okanye sincinci kangakanani na isicelo. Ngokuqhelekileyo uya kuba nempendulo ngaphantsi kweeyure ezingama-48 kodwa ube kwicala elikhuselekileyo njengoko amanye amaxesha onyaka exakekile kunamanye asifuni kuthembisa into esingenako ukuyifeza.
Ungasikholelwa? Sizame kwaye usithumelele umyalezo. Nokuba ufuna nje ukuthi "hi" kwaye usazise iingcinga zakho ngenkonzo. Uya kubona inkonzo eza kunye nokusebenzisa eyona ndawo ilungileyo kwi-Intanethi kwiinkonzo zasimahla ze-Instagram.
30I ngoJuni 2022
Inceda njani i-Instagram ekuxhaseni amaShishini amaNcinci namaKhulu?
Ukuba lelinye lawona maqonga eendaba ezentlalo adumileyo kwihlabathi, i-Instagram isetyenziswa ngabasebenzisi abamalunga neebhiliyoni ezi-2 ngenyanga. Uninzi lwaba basebenzisi balandela ubuncinci iprofayile yeshishini kwi-Instagram....
23I ngoJuni 2022
Ngaba uCwangciso lwe-Instagram lokusungula iNkonzo yokuBhaliswa?
14I ngoJuni 2022
Yonke into okufuneka uyazi malunga ne-Instagram Remix
Sinikezela ngeenkonzo ezingaphezulu zeNtengiso ze-Instagram
Izinketho zokuthenga ixesha elilodwa ngaphandle kokubhaliselwa okanye ukuhlawula rhoqo
Instagram Services Iinkonzo ze-Twitter Iinkonzo zeTikTok Iinkonzo zeTwitch IiNkonzo zePinterest IiNkonzo ze-YouTube Spotify IiNkonzo Iinkonzo zeSandiCloud
Uphando lweeHashtag abalandeli azithandayo Ukuthandwa kwe-IGTV Ukujonga kwakhona Iimpawu kunye nokufikelela Iimbono ze-IGTV izimvo
Iziphumo ziyaqhubeka zide zigqitywe
abalandeli Ukujongwa kwesitishi
Abalandeli / Abalandeli azithandayo izimvo izabelo izimvo
Udlala Uluhlu lokudlala Abalandeli abalandeli
Udlala Iyakhuphela abalandeli azithandayo izimvo Ukuphendula
kwababhalisele izimvo azithandayo izimvo Iiyure zokubukela izabelo
Thenga kwindawo yethu yoMlingane
Apha kuMnu. Insta, siyazingca ngenkonzo ekhethekileyo kunye namaxabiso afikelelekayo. Sukuthatha nje ilizwi lethu ngayo - jonga uphononongo lwethu lwabathengi ngezantsi.
Ngenisa uPhononongo lwakho
Iyamangalisa ngokwenene! 100% ipesenti ngokukhawuleza simahla kwaye legit! Andikholelwa ukuba bangaphi abalandeli endibafumeneyo, enkosi Mnu. Insta yindawo endiya kuyo. Ndiyayithanda kakhulu! Sisicelo esimangalisayo! Kulula ukuyisebenzisa kwaye ikhawuleza ngokukhawuleza ukuba ne-folwer kwi-Instagram yakho.
UMnu. Insta Uncede ukukhulisa abalandeli bam kwiintsuku nje ezimbalwa. Wonke umntu ofuna ukwandisa abalandeli bakhe ngoko nangoko oku kufanelekile ukujonga
Ndaneliseke ngakumbi ngabo. Okona kulungileyo kwishishini. Kwiintsuku ezimbini zobusuku abalandeli bam bahamba ukusuka kwi-200 ukuya kwi-598 ukubala ungachithi ixesha uze
Indawo emangalisayo yokuhamba ukuba ufuna uncedo lokuqalisa iphepha nakweliphi na iqonga leendaba zosasazo. Kwaye inika abalandeli simahla! Hamba uzibambe ngoku!
Yayikhawuleza ngokwenene kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ndibone iziphumo ngoko nangoko, kunye nabalandeli nje ukuba ndilandele amaphepha alishumi, onokuthi ukhethe kuwo.
Indawo enkulu kwaye, okubalulekileyo, isimahla, ungayisebenzisa ukwandisa ukuhambelana kwiphepha lakho le-ins ngaphandle kokuphulukana nepeni.
Le ndawo ilungile kubalandeli kunye nokuthanda kuba ungafumana izinto ezininzi kwaye zonke izinto ziyasebenza ngokwenene!
- URichard M.
Basinika abalandeli be-instagram simahla bayi-100 yeepesenti esemthethweni masihambe ndiyababulela kakhulu ngoku ndidume kakhulu
Uluncedo kakhulu kwaye ulungile usebenzisa !!!
Oku kusebenza kakuhle kakhulu! 100% Yizame ndinekiti yokuhlola iphepha amaxesha amaninzi emva kokuba ndiyithumele ngenxa yokuthandwa!
UMnu Insta ulungile ukuba ufuna ukuqalisa ukukhulisa iakhawunti yakho ye-instagram, iya kukunika abalandeli abasemgangathweni abavela kwihlabathi liphela. Linyathelo lokuqala nje ukuba ube nenani elingaguqukiyo labalandeli abafunyenwe kuMnu Insta uyakuqala ukuba neprofayile enomtsalane eya kukhokelela kubalandeli abatsha kunye nabaphilayo. Indawo entle yokuqala
Ndifumene abalandeli n likes enkosi! Pls musa ukuyeka kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kufumana ngakumbi.! Ndiyayithanda kakhulu
- iijini k.
Indawo eyoyikisayo yokufumana ukukhula kwe-Insta simahla kukho ezinye ezimfutshane eziza njengoko kuthatha ixesha elininzi kodwa liqonga elihle.
Iyasebenza! Emva koko banike ezininzi ukuthanda kwasimahla ukuze ukwazi ukuqalisa ukwakha into ngaphambi kokuba uhlawule nayiphi na imali.
Ibonelela ngabalandeli basimahla kunye neenkonzo ezihlawulelwayo ezisemthethweni nazo
Kulunge kakhulu kum unokufumana abalandeli abaninzi nokuba simahla kuluncedo kakhulu kwaye kuthembekile ndingacebisa kuphela
esona sicelo sibalaseleyo
Iluncedo kakhulu kwaye ikufumana abalandeli bokwenyani be-Instagram ndibalinganisela ngeenkwenkwezi ezi-5 ngenxa yomsebenzi wabo omangalisayo owawuvumela ukuba ube nabalandeli ngalo lonke ixesha ufuna.
Le webhusayithi ihambisa njengoko bekuthembisile. Ndicebisa abo bafuna abalandeli abaninzi. I-interface eyilwe kakuhle yenza kube lula ukufumana into oyifunayo kwiwebhusayithi!
Ndonwabe kakhulu kuphonononga iwebhusayithi emangalisayo, apha unokufumana ukuthanda simahla kunye nabalandeli kwaye iinkonzo zeprimiyamu ziyamangalisa! Uya kuyithanda.
Indinceda ndikhule kwi-Instagram ngokwabelana nabanye ngeakhawunti yam kwaye ndibenze balandele ukuze nabo bakhule
Iwebhusayithi incede ukuqalisa iphepha lam leendaba zentlalo. Yayisimahla kwaye ingenangxaki, kwaye kwakungekho ngxaki zokhuseleko, nto leyo eyayenza yangcono. Ndingathanda ukucebisa onke amaphepha amatsha eakhawunti ukuba ahambe kwiwebhusayithi yakho.
Ngaba ufuna isimahla, umgangatho ophezulu kunye nabalandeli ekujoliswe kubo be-Instagram yonke imihla?
Fumana simahla, umgangatho ophakamileyo kunye nokujolisa kubalandeli be-Instagram ngokucofa nje okumbalwa kumnikezeli we-Intanethi othembekileyo weenkonzo zentengiso ze-Instagram. [imeyile ikhuselwe] I-USA kunye ne-CAN: 888-881-9070
Ilungelo lokushicilela © 2022 Mnu Insta (mrinsta.com). Onke Amalungelo Agciniwe. Sitemap
IsiVumelwano seNkqubo yokuDibana
Ngaba i-Instagram itshintsha kaninzi i-algorithm yabo?